बोल्यो बार : 'डा. केसीको माग अदालतप्रतिको जनआस्था घटाउने काम'
बोल्यो बार : ‘डा. केसीको माग अदालतप्रतिको जनआस्था घटाउने काम’
नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई व्यक्तिगत रुपमा लान्छना लगाउने, अशिष्ट भाषा प्रयोग गर्ने र आफ्नो अनुकूल फैसला नआए राजीनामा माग गर्ने अनशनरत प्राडा गोविन्द केसीको कार्यप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
सबै प्रकारको दबाब र प्रभाव स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि अशोभनीय हुने हुँदा न्यायपालिकाको गरिमा कायम राख्न सबैले आफ्नो ठाउँबाट ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । साथै, यस्ता कामको समर्थन गर्दै अगाडि बढ्ने हो भने गलत परिपाटीको विकास हुनेहुँदा बारले डा. केसीलाई यस्ता खालका माग राखेर आमरण अनशन नबस्न आग्रह गरेको छ ।